ERGO KA SOCOTA BEESHA CIIDAGALE OO U BAXADAY DEEGANADA AY KA DHACEEN SHAQAAQADU AWDAL IYO GABILEY | Toggaherer's Weblog
Hargeysa 02 Mar 2009 (THN)
Ergo Balaadhan oo ka socota Beesha Ciidagale oo uu Hogaaminayo Gudoomiyaha Gudida Beesha Ciidagale ayaa Gaadhaay Deeganada Shaqaaqadu ka dhacaday ee Beelaha walaalaha ah ku dhex maraya deeganada U dhaxeeya Awdal Iyo Gabiley.
Ergada ayaa ah ergadii u horeysay ee ka socota Beelaha Somaliland ee gaadha Deeganada iyada oo ergadu La kulantay Aqoonyahanka Odayaasha Madax dhaqameedaya reer Gabiley ka dibna u gudbay Dhinaca Dila Iyo Awdal iyaga oo Habeenkii Xaly ahaana la kulmay Aqoon yahaynka Waxgaradka Iyo Odayaal Dhaqameedka Reer Awdal .
Mar aanu wax ka waydiinay Khadka Telefoonkana kula xidhiidhnay Gudoomiyaha eregada Beesha Ciidagale Mudane Kayse Haybe Maxamed ayaa noo sheegay In arinku meel wanaagsan u marayo Labada dhinacna ay kalsooni siiyeen waxa u horeeya ee ay imika wadaana ay tahay sidii xabad joojin loo dhex dhigi lahaa labada Ehel walaalaha ah ab iyo abtina isu ah.
Geesta kale Waxa iyana maanta ka baxaya Hargeysa ergooyin kale oo isugu jira Culimada Iyo Odayadaal Kale oo ka tirsan deegaanka Hargeysa.
Warqabadka ToggaHerer Hargeysa